Jereo ny Que Chivas & Tehirizo izao, dia mandeha any aoriana tolotra manokana!
Mariazy Costa Rica
Snorkel ao amin'ny Nosy Cano
Zipline ao amin'ny Tendrombohitra Osa
Surf Onja Kilasy Eran-tany
Mitaingina soavaly mankany amin'ny Riandranon'i Nauyaca
Fijerena trozona sy Dolphin
Kayak amin'ny ala honko
Kayak ny Pasifika
Tsidiho ny Jungle amin'ny ATV
Whitewater Raft ny renirano Savegre
Mandeha an-tongotra Corcovado National Park
Aiza FITIAVANA tena eny amin'ny rivotra!
El Castillo dia misokatra
Tongasoa eto El Castillo
Ny vahiny dia mamaritra ny traikefany kintana dimy tao El Castillo ho mahagaga. Mifalia ao amin'ny tranonay mirentirenty. Mialà sasatra ao amin'ny dobo filomanosanay eo amoron'ny hantsana manatrika ny Pasifika mahery. Ankafizo ny sakafo sy cocktails miavaka. Aza adino anefa ny manala kiraro ary mijanona ao an-trano. Antsoinay hoe kanto mahazatra izany.
Misy antony mahatonga ny trano fandraisam-bahiny sivy ho an'ny olon-dehibe tokana antsoina hoe The Castle: Ilay rafitra mijoalajoala mirefy 600 metatra ambonin'ny Ranomasimbe Pasifika no azo lazaina fa ny fomba fijery manaitra indrindra manerana an'i Costa Rica. Mahavariana, eny. Mafy, tsia. Ny mpiasanay miavaka dia hiantoka fa ny fialan-tsasatrao no lehibe indrindra mandritra ny androm-piainanao.
Jereo ny El Castillo
Misakafo ao amin'ny trano fisakafoan'i El Castillo manokana, Castillo's Kitchen, foto-kevitra Chef's Table mifehy ny fivoaran'ny sakafo Costa Rican. Manandrama singa ao Costa Rica amin'ny sakafo rehetra amin'ny fomba vaovao sy manavao.
Ampaherezo ny sainao
Tongasoa eto amin'ny ala mikitroka ary eo amin'ny telo isan-jaton'ny zavamananaina eto an-tany. Raha tianao ny bibidia noho ny fiainana alina, ity no toerana ho anao. Ny fijerena trozona, ny snorkeling, ny fitsangantsanganana, ny fanjonoana an-dranomasina lalina, ny fametahana zipo, ny surf, ny kayak, ny fibangoana amoron-dranomasina, ary ny fijerena sokatra dia ao anatin'ny minitra vitsy miala an'i El Castillo.
Hevitry ny vahiny
Inona no lazain'ny olona momba an'i El Castillo
Tianay El Castillo! Nahafinaritra ny mpiasa! Ny tale jeneraly, Rebeca, dia nanara-maso ny fijanonanay ary nanao izay rehetra ilainay… fampiononana amin'ny efitrano, sakafo, zipline ary fitsangatsanganana anaty ala ATV, fitaterana….
Hotely kilasy voalohany tanteraka. Saika mitovy amin'ny mpitsidika sy sariaka daholo ny mpiasa rehetra ary mahafantatra ny fomba hahatonga ny fijanonanao hahafinaritra.
Toerana fampakaram-bady tonga lafatra! Vao haingana izahay no nanao ny mariazinay tao El Castillo, ary izany no nofinofisinay, sy ny maro hafa!
Ny fahalavorarianao manokana ao amin'ny paradisa tropikaly. Tsy azoko antoka na hanomboka ny famerenana momba ny fomba fijery na ny mpiasa satria samy niavaka.
Jereo manokana ny El Castillo alohan'ny hitsidihana azy
Afaka mandehandeha eny amin'ny hotely manontolo ianao, ao anatin'izany ny efitrano, trano fisakafoanana ary zaridaina, mba hahafantaranao hoe manao ahoana ny mijanona ao El Castillo. Tsindrio ny bokotra eto ambany raha te hanomboka!
Araho izahay #ELCASTILLOCR
100% amin'ny vahiny no manoro hevitra
Fitsidihana 360 degre
Mifandraisa amin'i EL CASTILLO
© 2015-2020 El Castillo Hotel | Zo rehetra voatokana
Site noforonina sy naorin'ny Laabs Creative
© 2015-2021 El Castillo Hotel | Zo rehetra voatokana
Fitantanana Corcovado Park